Ra’iisul Wasaarahaha Faransiiska oo laga helay xanuunka Covid 19. | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Ra’iisul Wasaarahaha Faransiiska oo laga helay xanuunka Covid 19.
Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in Ra’iisul wasaare Jean Castix, uu ku dhacay fayraska Corona, sidaas darteena uu gali doono xaalad karantiil ah tobanka maalmood ee soo socda.
Ra’iisul Wasaare Jean Castix, oo hadda 56 sano jir ah ayaa la caddeeyay inuu haleelay Xanuunka Corona Virus, isaga oo horay u qaatay tallaalka ka hortagga xanuunkan.
Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, ayuu ku dhacay xanuunka Covid-19 bishii Diseembar 2020, sidokale tiro kamid ah wasiirrada Faransiiska ayaa laga helay fayraskan, kuwaa oo ay kamid ahayeen Wasiirka Maaliyadda Bruno Le Maire iyo Wasiirka Dhaqanka Roslyn Bachelot.
Inta badan waddamada reer Yurub ayaa la daalaa dhacayo sidii ay ugu hortagi lahayeen fitaanka mowjadaha cusub ee Covid 19, iyadoo horay inta dabadan dalalka Yurub loogu soo rogay xannibaado dhanka caafimaadka ah si loo xakameeyo xanuunkan.
Wasiirka caafimaadka dalka Jarmalka Jens Young, ayaa shir Jaraa’id uu shalay qabtay ka digay halista xanuunkan oo dib u soo laba kacleeyay, isaga oo sidokale sheegay in dadka dalkiisa ee aan qaadan Tallaalka ka hortaga Corona Virus la tallaali doono.
Previous articleDoorashada 5-kursi xildhibanada Golaha shacabka ee degaannada Gobolada Waqooyi(Somaliland) oo bilaabatay
Next articleGuddiga doorashada Heer Federaal oo shaaciyay doorashada laba kursi ee BFS
Hindiya: Diyaarad uu la socday Madaxa Difaaca oo burburtay
kullane - December 8, 2021 0
Diyaarad Helicopter ah oo...